राजीनामा होइन, भागबण्डा
काठमाडौं । केपी ओलीले प्रधानमन्त्री छोड्नु नपर्ने भयो । प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाललाई मुख्यमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक पदहरुमा भाग दिएपछि राजीनामा राजीनामा भनेर कुर्लिरहेका प्रचण्ड, माधवको चित्त बुझ्ने रिपोर्ट आयो ।
नेकपालाई बन्दी र देशमा काम गर्न नदिएर प्रचण्ड र माधव नेपाल गुटले पाए चाहिँ के ? किन सबैतिर बहुमत छ भनेर बासेको ? कता गयो बहुमत ? नेकपाभित्रको सत्तँ संघर्षको सिकार आमनागरिकले बनिदिनुपर्ने ? यसरी फासफुस हुनुथियो त विचार, सिद्धान्त, बिधिका धाकधक्कु किन लाइरहेको होला ? यो प्रश्न यतिबेला नागरिक समाजमा जोडतोडले उठिरहेको सुनिदैछ ।
यही समूह भन्छ– भागबण्डा मिल्यो, अव एमसीसी पनि पास हुन्छ भन्दा हुन्छ । यसबारे कार्यदलले एउटा रिपोर्ट पेश गरिसकेको छ, सम्भव जति परिमार्जन गरेर पास गरिदिए हुन्छ । देशहित होइन, नेकपाका नेताहरको हित महत्वपूर्ण छ । यस्तै देखियो नेकपाको राजनीति, नेताको स्वार्थमा जस्तोसुकै निर्णय हुनसक्छ ।